महाधिवेशन अगावै बाहिरियो एमालेको भयङ्कर भित्री तयारी, अब भीम रावल के गर्लान् ? – GALAXY
महाधिवेशन अगावै बाहिरियो एमालेको भयङ्कर भित्री तयारी, अब भीम रावल के गर्लान् ?
काठमाडौं । १० औँ महाधिवेशन अगावै एमालेको भित्री तयारी बाहिरिएको छ । एमाले नेताहरूले १० औँ महाधिवेशनबाट सहमतिमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भनिरहेका छन् । अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली निर्विकल्प देखिन्छन् ।
तर सहमतिमा अन्य पदाधिकारी को को आउलान् रु १० बुँदे सहमति गरेका र माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
चितवनमा मङ्सिर १० देखि १३ गतेसम्म हुने महाधिवेशनबाट अध्यक्षसहित १५ पदाधिकारी चुनिनेछन् । त्यस्तै, २ सय २५ केन्द्रीय सदस्य चयन हुनेछन् ।
सत्ताबाट बहिर्गमन र पार्टी विभाजनपछि हुन लागेको महाधिवेशनबाट एमालेले एक ढिक्का रहेको सन्देश दिन खोजेको छ । नवौँ महाधिवेशनमा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर प्यानल नै बनाएर चुनाव लडेका थिए ।
नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधी चयनका खबर देशभरबाट आइरहेका छन् । यसैबीच यता नेकपा एमालेको १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि काभ्रेबाट सर्वसम्मत् रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट गरेको छ ।
जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ बाट सबै महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वसम्मत चयन भएका हुन् । काभ्रेमा जम्मा ३४ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएका छन् ।
जस अनुसार निर्वाचन क्षेत्र १ बाट खुल्लातर्फ नारायणप्रसाद पाण्डे, चन्द्रबहादुर लामा, रेशमबहादुर लामा, केशवप्रसाद बडाल, जेनिश लामा, दिलीप घिसिङ्ग, राजन भुर्तेल, दिलीप तामाङ, चूडामणि गौतम र कृष्ण खुलाल छनोट भएका छन् । सोही क्षेत्रबाट महिला महाधिवेशन प्रतिनिधितर्फ गोमा भुर्तेल, गीता बन्जरा, कमला काफ्ले र शान्ता न्यौपाने सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।
निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट खुल्लामा अशोक व्यान्जु, श्यामसुन्दर श्रेष्ठ, रामशरण दाहाल, राजकुमार सापकोटा, नकुलप्रसाद पराजुली, कञ्चन अधिकारी, प्रेम लामा, बेदप्रसाद तिमल्सिना, राधाकृष्ण बस्ताकोटी, कुमार थापा, विदुर सापकोटा र रिता गौतम ९ढकाल० चयन भएका हुन् । महिलातर्फ भने निर्मला शाही, भक्तकुमारी लामा, विमलाकुमारी चौलागाईं शर्मा, विमला सापकोटा र सुभद्रा अधिकारी सर्वसम्मत चयन भएका छन् ।